सेटअप Azure पावरसबै चरण-चरण-चरण (स्थापना र कन्फिगर गर्नुहोस्) - यो प्रशिक्षण
सेटअप Azure पावरसबै चरण-चरण-चरण (स्थापना र कन्फिगर गर्नुहोस्)
Azure PowerShell कसरी सेटअप गर्ने?
Azure को अवलोकन
Azure PowerShell के हो?
Azure PowerShell परिचय गर्दै
माइक्रोसफ्ट Azure, पहिले नै विन्डोज एयुरेजको रूपमा उल्लेख गरिएको माइक्रोसफ्टको वितरित कम्प्युटिङ चरण हो र फ्रेमवर्कले प्रणाली व्यवस्थापन, परीक्षा, स्टकप्लिङ, र यतिको लागि वितरित कम्प्युटिङ प्रशासनिकहरूको दायरा प्रदान गर्ने आशा गर्दछ। माइक्रोसफ्टको सर्भरको विश्वव्यापी प्रणालीले कार्यालयहरूलाई सामान्य जनसंख्या क्लाउडमा अवस्थित अपरेसनहरू सञ्चालन गर्न दिन्छ वा यदि आवश्यक छ, मापन वा वा द्वारा अर्को अनुप्रयोगलाई अर्को अनुप्रयोग बनाउँदछ। स्काई नीलो प्रशासनिकहरू Microsoft द्वारा 11 फरक प्रकारमा वर्गीकृत गरिएका छन्। तिनीहरू हुन्: पीसी, वेब र बहुमुखी, परीक्षा, प्रणाली प्रशासन, मिडिया र सीडीएन, सूचना भण्डारण, प्रशासन र सुरक्षा, क्रस प्रजनन जोडी, चरित्र र प्रशासन, प्रगति र चीजहरूको वेब प्राप्त गर्नुहोस्। अर्को चरणमा हामी छलफल गर्नेछौं Azure Powershell।
अजुर पावरसहल म्युल्यूल को एक सभा हो जुन cmdlets को कार्य को जिम्मेदारी संग दिइएको छ, जसको व्यवसाय को तदनुसार Azure को PowerShell को उपयोग को लागी राखन छ। यी cmdlets प्रयोग उद्देश्य, विस्तृत, प्रशासन पठाउने र निरीक्षण गर्ने व्यापक वर्गीकरणका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ र Azure चरणको प्रयोग व्यवस्थापन। विशेष परिस्थितिहरूमा सीडीडीलेटहरू प्रयोग गर्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तै अयुरे प्रविष्टिमा डिजाइन र बनाउने जस्ता भर्चुअल मिसिनहरू, वेब अनुप्रयोगहरू, भर्चुअल प्रणालीहरू, र त्यसो त।
Azure PowerShell ले दुईवटा मोड्युलहरू प्रयोग गर्दछ किनकि, तपाइँले अर्को पावर शेल सञ्झ्याल खोल्न सुरु गर्नुपर्दछ र त्यस पछि एरेन्ड-मोड्युलका विशेष फारमहरूमा ल्याउन आयात-मोड्युलको प्रयोग गरी। ध्यान दिनुहोस् कि 2.1.0 अघि छुटेको अनुकूलनहरू Azure PowerShell सँग समानताको एक निर्दोष चित्र प्रस्तुत गर्दैन। सबै भन्दा राम्रो तरिकाले आदर्श तरीका निश्चित गर्न को लागी कि तपाईं Azms PowerShell को डिजाइन .msi या WebPI देखि पोषण को रूप मा यो अधिक स्थापित मड्यूल रूपहरु मिटा दि्छ।
त्यसोभए, तपाईलाई थाहा हुनु पर्छ कि अजुररआरएम र अजुरज्यूले यस तरिकामा केही तरिकामा अन्तर लिङ्क गरेको छ दुवैको समवर्ती अद्यावधिक आवश्यक हुन्छ।
तपाईले Azure PowerShell ओभरहाल गर्न सक्नुहुन्छ वेबपेज वा PowerShell प्रदर्शनीबाट। Azure PowerShell डाउनलोड गर्नुहोस् र स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस्। त्यसोभए तपाइँले कुनै पनि शटमा अजुर पावरसहल 0.9.x द्वारा अवस्थित हुने हो भने, यो प्रतिपादन स्वाभाविक रूपले अद्यावधिकमा स्थापना रद्द गरिनेछ। यदि तपाइँ पावरसहेल ग्यालेरीबाट Azure PowerShell मोड्युलहरू परिचय गर्न रोज्नु भएको छ भने, मोड्युलहरूले स्थिर रूपमा Azure PowerShell वातावरणको ग्यारेन्टी गर्न स्थापनाकर्ताबाट हटाइयो।
20533: Microsoft Azure Infrastructure Solutions लागू गर्दै
20532 बी: माइक्रोसफ्ट एयुरेज समाधानको विकास
20487B: विन्डोज एक्जुर र वेब सेवा विकास गर्दै